१२ वर्षमापनि देश उस्तै जाँदा आकाशमा आउँदा बाकसमा आउने नेपाली बढे- यसरी रोकौं !जिम्मेवारी सबैको हो ~ Khabardari.com
१२ वर्षमापनि देश उस्तै जाँदा आकाशमा आउँदा बाकसमा आउने नेपाली बढे- यसरी रोकौं !जिम्मेवारी सबैको हो
१२ वर्ष पछिपनि उस्तै छ देशको अवस्था इराकमा जसरि नेपाली मारिए त्यासैगरि मारिएको खबर सुन्नु पर्यो अब्गनिस्तान्मा । हामीलाई लास लिनजाने सरकारभन्दा रोजगार सिर्जना गर्ने सरकारहरु चाहियो । अबगानिस्तान क्यानेडाको कम्पनिले सोझा नेपालीलाइ बिना सुरक्षा बसमा यात्रा गराइने गरेको देखि स्थानीय सुरक्षाकर्मिनै आतंकबादीसंग मिलेको कुराले नेपालीहरुको ज्यान जोखिम हुदाहुदै काम गर्ने गराउने परिपार्टी देखियो ।
घटना घटेपछि मात्र खुल्ने हाम्रा आखाहरु
अब फेरी यस्तो घटना रोक्न तलको उक्लेख गरिएको क्रियाकलाप अजै देखि रोकौं
यस घटनाका दोषीहरु :
नम्बर १ नेपालको राजनीति : युवाहरुलाइ दुरुपयोग गरि राजनीतिको धन्दा चलाउने , युवालाई बेरोजगार बनाई अपराध गर्न उक्साउने र अन्तिममा विदेश धकेल्न बाध्य पार्ने
२. हाम्रो समाज - डलर र घरका तला गनेर सफलता मापन गर्ने ,पैसामै सबै चरित्रको सर्टिफिकेट जारी गर्दिने, गरिखान्छु, राम्रो गर्छु भन्नेलाइ खिसीटिउरि गर्ने असहयोग गर्ने विदेश जान मात्र ऋण दिने
३. बिचौलिया दलाल हरुको अरुको ज्यान जेसुकै होस् भन्ने संस्कृति - डलर फल्छ , केहि हुन्न राम्रो छ भनि कमिसनको लागि उक्साउने हरु
४. हाम्रो मानसिकता - सरकारले असुरक्षित गन्तब्य भनि अबैध गन्तब्यमा सुचित गरका ठाउँमा जबर्जस्ति जाने हाम्रा जिद्दीपन
५. कुमित्र र कुपरिवारहरु : अरुका गैर कानुनी धन्दा , गलत हिसाबबाट पाएका सफलता तुलना गरि मर्न जान अनुमति , सल्लाह र जानकारी पछिपनि नरोक्ने लाचार सम्बन्धहरु
६. थोरैपनि जीवन रक्षाको उपाय नसोची, टाउकोमा बज्रपरेपछि मात्र खुल्ने हाम्रा चेतहरु
अन्त्यमा देशमा आफ्नो सानै भए पनि ब्यबसायको मालिक बन्न लाजलाग्ने बिदेशमा गुलामी गर्न तयार हुने मानसिकता , पेसा लाइ ठुलो सानो भनि तुलना गर्दिने हाम्रा गलत संस्कार , सानो काम गर्नेलाई हौसला हैन हेयले हेर्ने नजरहरु ।
आउनुहोस यी सबै क्रियाकलापको आजै देखि अन्तिम दाहसंस्कार गरेर चिर शान्तिको कामना गरौँ ।
Some More about this from Kantipur daily go to link below:
काबुलमा घाइतेहरू भन्छन्, ‘बसमा रिमोट फिट गरेजस्तो लाग्छ’
'कुनै पनि आत्मघाती हमलाकारी को लास थिएन
काबुलको बेलायती नियोगमा कार्यरत नेपाली सुरक्षागार्ड पनि असुरक्षित
‘करिव २५ मिनेटको बाटो बिना हतियार साधारण माइक्रोबसमा हिडाउँछन्’ for detail go to his link : http://bit.ly/28QCK5Y
हामीलाई स्थानीय समय अनुसार विहान पाँचबजे क्यानेडियन राजदुतावास डयुटीको लागि जान तयार हुन भनिएकाले त्यही अनुसारको तयारी थियो । हामी वस्ने लजको गेटबाट वाहिर निस्केपछि दायाँ बाटो भएर जानुपर्छ । दायाँलाग्ने वित्तिकै एउटा पेट्रोलपम्म र त्यसको अगाडि मासु पसल छ । त्यहाँ पुग्नासाथ एक्कासी ठूलो आवजा आयो र त्यससँगै होस पनि गुम्यो । करिव १० मिनेट पछाडी मेरो होस खुल्यो । मान्छेहरु कराएको आवाज अलिअलि सुनियो किनभने विष्फोटका कारण मेरो कानको जालीमा असर गरेको थियो ।
म हे भगवान, हे भगवान भनेर गुहार गर्नथाले । १० मिनेटपछि अफगानिस्तानका पुलिसले नेपालीहरु पो रहेछन् भनी कुरा गरेको सुने । त्यति बेलासम्म म विस्फोट भएको बसको झयालमा नै थिए । मैले उनीहरुसँग मलाई बाहिर निकाल्न सहयोग गर्नुप¥यो भनी आग्रह गरे । अफागानिस्तानको प्रहरीले मलाई झ्याल फोडेर बाहिर निकाले । जव मेरो होस खुल्यो मैले थाहापाए मेरो एकजना साथी मेरो काखमा नै मरेछन, जसले मलाई निकै पिडा दियो । उसको कानबाट धेरै रगतआएको थियो ।
त्यतिकैमा मलार्इ प्रहरीले स्थानिय अस्पतालको इमरजेन्सी रुमा लगे र त्यसको केही समयपछि नै नेपालमा रहेका परिवारका सदस्यहरुसँग कुराकानी गरे र केही राहत भयो । त्यसैगरी मैले नेपालको साथी देउमान तामाङलाई फोन गरे । मलाई के लाग्छ भने त्यस्तो असुरक्षित देशमा पहिला रोडलाई क्लियर गर्नुपर्दथ्यो । त्यसैगरी स्कर्टिङको पनि व्यवस्था आवश्यक थियो तर हाम्रो सुरक्षामा त्यति ध्यान दिइएन भन्ने लाग्छ ।
गाडी निस्कनु भन्दा पहिला एक दुई जना मान्छेले सडकको अवस्था जाँच बुझगर्नु पर्दथ्यो । मेरो विचारमा यो आत्मघाती हमलाहोइन, टाइमिङ बमहुनुपर्दछ । किनभने भुपु आर्मी भएको हिसावले यस सम्वन्धमा मलाई केही जानकारी छ । त्यहाँकुनै आत्मघाती हमलाकारी थिएनन ।